I-Monocrystalline ifake i-alumina, inyibilika kubushushu obuphezulu ngenkqubo ekhethekileyo, yinto yokugaya ephezulu. Amasuntswana erhabaxa acimile mhlophe.
1.I-sodium ephantsi, ngaphantsi kwe-0.2%
Ubunzima be-4.High bulk kunye ne-high wear wear
Izinto 5.High-isiphelo esirhabaxa
6.Small crystal, akukho lula ukonakalisa workpiece
I-dense corundum eshinyeneyo luhlobo olutsha lwezinto ezicocekileyo ezisulungekileyo ezenziwa ngokusebenzisa i-alumina yokucoceka okuphezulu kunye nokunciphisa iarhente kumlinganiselo othile, ukunyibilikisa kwiziko lombane kunye nokupholisa. Isigaba esiphambili sekristal yi-α-Al2O3 kwaye umbala ungwevu okhanyayo.
Ubunzima be-1.High bulk kunye ne-porosity ephantsi kakhulu
2.Excellent banxibe ukumelana
3.Good slag ukumelana kwiqondo lobushushu hign
Uzinzo umthamo 4.High
Ukumelana 5.Good ukothuka thermal
I-alumina emhlophe ehlanganisiweyo yinto ekrwada ekrwada, eyenziwe ngomgangatho ophezulu we-alumina powder emva kokuba inyibilike kubushushu obuphezulu ngaphezulu kwe-2200 ℃ kwisithando somlilo sombane emva koko saphola. Isigaba sayo esiphambili sekristal yi-α-Al2O3, kwaye umbala umhlophe.
Yeyona nto iphambili ekrwada ekuveliseni izinto ezingafunekiyo nezime okweqondo eliphezulu, isetyenziswa ngokubanzi kumashishini ahlukeneyo.
Ukumelana 2.Good banxibe nokumelana
Lobushushu umthwalo 3.High xa usenza iimveliso
4.Ukuphucula uzinzo lwevolumu kunye nokuxhathisa kukothuka kwezinto.